Taliska Mareykanka oo sheegay in Muddo kordhinta ay ka weyn tahay dagaalka Al-Shabaab – DMS
HomeWararkaTaliska Mareykanka oo sheegay in Muddo kordhinta ay ka weyn tahay dagaalka Al-Shabaab
Taliska Mareykanka oo sheegay in Muddo kordhinta ay ka weyn tahay dagaalka Al-Shabaab
23rd April 2021 Zamiir M Ali
Jeneraalka ugu sareeya Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa khamiistii u sheegay golaha Senate-ka in go’aanka maamulka Trump uu dib ugu dejiyay ciidamadiisa meel ka baxsan Soomaaliya uu abuuray caqabado hor leh oo ka dhan ah la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab.
Jeneral Stephen Townsend ayaa yiri “Ma dafiri karno in dib u dhigista ciidamada laga saaray Soomaaliya ay soo saartay lakabyo cusub oo qatar leh”.
“Fahamkeenna waxa ka socda Soomaaliya waa ka yar yahay sidii uu ahaa markii aan dhulka joognay, oo aan la joognay jaallayaasheenna,” ayuu u sheegay xubnaha aqalka sare warbixin ay ka yeesheen dib-u-eegis lagu sameynayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika, iyo sidoo kale halka bartamaha Mareykanka. Taliska wuxuu ka shaqeeyaa Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Aasiya.
Horraantii bishii Diseembar, Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu amar ku bixiyay in ku dhowaad 700 oo askarta Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ay isaga baxaan dalka.
Ciidamada ayaa halkaas u joogay inay ka caawiyaan militariga dalka bariga Afrika dagaalka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab.
Al-Shabab ma aha walaaca ugu weyn ee hadda ka jira Soomaaliya, Laakiin Khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jirta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka… kordhinta dastuurka ee dheeriga ah ee muddada madaxweynaha ee xafiiska – taasi waa caqabadda noogu weyn, aniga ka fikir, hada, ”Townsend ayaa yiri isagoo ka jawaabaya su’aal uu weydiiyay Sen. Jack Reed, DR.I., gudoomiyaha guddiga.
AFRICOM waxay shaacisay bartamihii bishii Janaayo in bixitaanku uu dhameystirmay. Ciidamada intiisa badan waxaa loo wareejiyay wadamada deriska ah si ay usii wadaan howlgalka.
Townsend ayaa sheegay Khamiistii in “tiro yar” oo ku saabsan 100 askari ay weli ku sugan yihiin Muqdisho, caasimadda dalka, halkaas oo shaqadooda ay ku xiran tahay safaaradda.
Wararka Wararka Dowladda Jabuuti oo ka jawaabtay eedeyn uga timid Farmaajo
Taliska Booliska Hirshabeelle oo soo saaray awaamiir cusub